The “deep paintings” of Warhammer 40,000K Dawn of War III XCHARX NAB Show News by Broadcast Beat. Official Broadcaster of NAB Show, Producer of NAB Show LIVE
Stirlitz မီဒီယာဘီဘီစီစကော့တလန်မှအစွမ်းထက်နယူးသစ်ခုတ် Software များဖြေရှင်းနည်းဘဝမှကယျတငျ
ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား™မှာ LiveU အားဖြင့်ပို့ပြီးအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောဂီယာ၏ 15,000 နာရီ
Home » အသားပေး » စစ်ပွဲ III ၏ Warhammer 40,000K Dawn ၏ "နက်ရှိုင်းသောပန်းချီကားများ"
စစ်ပွဲ III ၏ Warhammer 40,000K Dawn ၏ "နက်ရှိုင်းသောပန်းချီကားများ"
စစ်ပွဲ III ၏အရုဏ်တက် ၏စစ်တိုက်-scarred ရှေ့တန်းမှတစ်ဖန်ပြန်လာ Warhammer 40,000, Acheron ၏ပျောက်ဂြိုဟ်မှအာကာသရိန်း, Eldar နှင့် Ork ၏ပဋိပက္ခမြင်၏။ ဝင်ရိုးတန်း Animation ရဲ့ဒါရိုက်တာ Abed Abonamous အလှအပနှင့်အကြမ်းဖက်မှုဘေးချင်းယှဉ်ထိုင်ရှိရာကမ္ဘာထုတ်ဖော်, ဂိမ်းရဲ့ brooding expository ဖြတ်မြင်ကွင်းများတည်ဆောက်ရန်ဂန္ထဝင်ပန်းချီကားထဲကနေလှုံ့ဆော်မှုကိုယူပုံကို ... သင်ယူဖို့အပေါ်ကိုဖတ်ပါ
ဝင်ရိုး Animation ရဲ့ပထမဆုံး၏နိမိတျဆိုးအိပ်မက်ဆိုးဤလောကသို့တိုးမြှင် Warhammer 40,000: စစ်ပွဲ III ၏ Dawn အစောပိုင်း 2016 ၌တည်၏။ ရှေးဟောင်းပစ္စည်း Entertainment က - ထိုချီးကျူး Real-time မဟာဗျူဟာစီးရီး၏ဖန်ဆင်းရှင် - ၏မျှော်လင့်ချက်များစိန်ခေါ်မယ်လို့ထားတဲ့ကြေညာချက်နောက်တွဲယာဉ်ဖန်တီးရန်စတူဒီယိုနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူး Abed Abonamous အပေါ်ကိုခေါ် Warhammer စကြဝဠာနှင့်၎င်း၏ဇာတ်ကောင်အပေါ်တစ်ဦးမဲမှောင်ယူထုတ်ဖော်ဂိမ်း။
အဆိုပါရလဒ်ZdzisławBeksińskiနှင့် HR Giger တူသောပန်းချီဆရာများရဲ့တားမြစ်တဲ့အလုပ်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းပုံရိပ်ယောင်များမှတစ်ဆင့်တစ်ဦးသရဲခြောက်တဲ့ခရီးခဲ့တယ် - လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောကျောက်အဆောက်အဦများမြေမှုန့်ထွက်လာသည့်အပူရှိန်နောက်ကွယ်မှ Tower; ဧရာမသေအလောင်း-strewn စစ်မြေပြင်ကိုဖြတ်ပြီးတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွား; နှင့် lonesome စစ်သားတစ်ဦးမဲ့ပြုံးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အန္တိမအဆုံးရင်ဆိုင်နေရသည်။
ဝင်ရိုးတန်းနှင့် Abonamous တစ်ဖန်၏ netherworld သို့ဖိတ်ခေါ်ခံရတယ် စစ်ပွဲ III ၏အရုဏ်တက် နောက်ထပ်နောက်တွဲယာဉ်ကဲ့သို့တူညီသောသေံနှင့်လေထုသူတို့နှင့်အတူ imbuing, ခေါင်းစဉ်ရဲ့ In-ဂိမ်းချိတ်ဆက်သရုပ်ဖော်တစ်လျှောက်လုံးဒီလေထုကိုချဲ့ထွင်ရန်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည်ဆွဲဆောင်မှု 14D "အဆိုကို-ပန်းချီ" ၏ 2.5 မိနစ်ကိုဖန်တီးရန်အလုပ်လုပ်ခဲ့တစ်ဦးချင်းစီ၏အတိုင်းအတာများနှင့်ဒေါသအမျက်ကိုပြ, မြင်ကွင်းများဖြတ် စစ်ပွဲ III ၏အရုဏ်တက်'' ကနဦးနောက်တွဲယာဉ်ပြံ့နှံ့နသောတူညီဖိနှိပ်လေထုနှင့်အတူအကြမ်းဖက်အဓိကရုဏ်း့။
အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ် Warhammer ဝါသနာရှင်များ, ဝင်ရိုးတန်း Animation ရဲ့အဖွဲ့ချစ်သော tabletop ဂိမ်းများအတွက်ကြောင့်ရှိခိုးပြပါလိမ့်မယ်သိသောရှေးဟောင်းပစ္စည်း Entertainment က, အဘို့ရှေးခယျြမှု၏စတူဒီယိုအဖြစ်၌ရပ်နေ၏။
ဝင်ရိုးကို cut မြင်ကွင်းများ headfirst တစ်ဖန်ရေငုပ်ဝဠာသို့ Abonamous အတူနောက်ပိုင်းတွင် Pre-ထုတ်လုပ်မှုကနေညာဘက်ကို tonal မှတ်စု hit သေချာစေရန်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းနှင့်အတူနီးကပ်စွာပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။
"ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဟာ storyline ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စိတ်ကူးရှိခဲ့ပါတယ်; သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြတ်မြင်ကွင်းများ '' ဇာတ်ကြောင်းစည်းချက်အပေါငျးတို့သဖုံးလွှမ်းကြောင်းအသေးစိတ် script များကို ပေး. , "Abonamous ရှင်းပြသည်။ "သူတို့ကလည်း script များတဦးတည်းဖြတ်မြင်ကွင်းတစ်ခုနှင့်အခြားအကြားအဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုထုတ်ဖော်, ဂိမ်းရဲ့ဇာတ်ကြောင်းအခြေအနေတွင်သို့ချည်ထားပုံကိုထုတ်ဖော်တင်ပြချက်များကိုပေး၏။ ဒါကကျွန်တော်တစ်ဦးပိုကြီး၎င်းပြင်ဆင်၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်ဖြတ်မြင်ကွင်းများစဉ်းစားရန်အသုံးပြုသည့် '' ဇာတ်ကြောင်းကော် '' တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ, ဖြစ်ခဲ့သည်။ "
Abonamous နှင့်ဝင်ရိုးတန်းဒီ "၎င်းပြင်ဆင်" နှစ်ဦးစလုံးဇာတ်ကြောင်းများနှင့်အနုပညာ, တတ်နိုင်သမျှကြွယ်ဝသောခံစားမိစေရန်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့အဖြစ် "နက်ရှိုင်းသောပန်းချီကားများ" ၏တစ်ဦးစီးရီးအဖြစ်ဖြတ်မြင်ကွင်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဘောင်ကြောင်း permeates ပုဆိုးညစ်ယုတ်မာတဲ့လေထုထဲတွင်ပြည့်နှက်နေလေသည်, လေထု diorama သို့မဟုတ်ဇာတ်ကောင်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထင်ရှား စစ်ပွဲ III ၏အရုဏ်တက်.
"ကျနော်တို့ကကွက်ကိုပုံကြမ်းသို့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းကပေးအပ် script များဖြိုဖျက်ခြင်း, ကြားမှာ developer များနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုဆွေးနွေးနေစဉ်သူတို့ကို finessed" Abonamous ရှင်းပြသည်။ "ရှေးဟောင်းပစ္စည်းရဲ့ script များနှင့်တင်ပြချက်ခဲတစ်ဦးချင်းစီဖြတ်မြင်ကွင်းတစ်ခုဘို့မဆိုတိကျတဲ့ရေးစပ်သီပြဌာန်း။ ကျနော်တို့ကိုဖန်တီးရန်လိုနက်ရှိုင်းသောပန်းချီကားများအဘို့ချဉ်းကပ်ထဲမှာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်, နှင့်ကင်မရာပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပြောပြရန်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းရေးစပ်သီအပေါ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး။ "
အမှန်စင်စစ်ကွက်ကိုပုံကြမ်းနှင့်နောက်ဆုံးအထွက်အကြားတူညီမှုအတွက်မျက်မြင်နိုင်ပါသည် ခဲကွက်ကိုအနုပညာရှင်ရှင်ပေါလု Coulthard ရဲ့နှိုင်းယှဉ် reel, အတူကနဦးပုံကြမ်းအသေးစိတ် စစ်ပွဲ III ၏အရုဏ်တက်'' s ကိုနောက်ဆုံးရလာဒ်များ။
ကို cut မြင်ကွင်းများ '' ဇာတ်ကြောင်းဒြပ်စင်အဘို့အရှေးဟောင်းပစ္စည်းရဲ့လမ်းညွန်အသုံးပြုခြင်း, ဝင်ရိုးတန်း, အကြည့်သတ်မှတ်ခံစားရနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအတိုဖွဲ့စည်းမှု၏ချဉ်းကပ်ဖို့စတူဒီယိုနှင့်အတူပူပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ကအရမ်းဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အလင်းရောင်၏အသုံးပြုမှုမှတဆင့် viewer ရဲ့မျက်စိပဲ့ပြင်သူကိုဂန္ထဝင်ပန်းချီဆရာများ၏သွေးကြော၌ဤချဉ်းကပ်," Abonamous ရှင်းပြသည်။
ကျနော်တို့ကဖြတ်မြင်ကွင်းများ In-ဂိမ်းအတွေ့အကြုံများကစားသမား 'ဖို့အမြင်အာရုံစာအဆက်အသွယ်ကြောင်းသေချာစေရန်ခဲ့အဖြစ် "ရှေးဟောင်းပစ္စည်း, တည်နေရာနှင့်ဇာတ်ကောင်များအတွက်အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းများဖြစ်သည်။ cut-မြင်ကွင်းများတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဇာတ်ကောင်သို့မဟုတ်တည်နေရာများကိုအသေးစိတ်ဒီဇိုင်း, ပြီးတော့ signoff များအတွက်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းမှသူတို့ကိုပြန်ပို့မယ်လို့အဓိပ်ပာယျအရာပိုမိုမြင့်မား resolution ကိုပိုင်ဆိုင်မှု, လိုအပ်သောအဖြစ်ဤသည်, သို့သော်, တစ်လမ်းလမ်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ "
ငွေရတတ်သောသူ, ထိတွေ့နိုင်သောဒီဇိုင်းများအဆင်သင့်ဖြစ်ကြသည်ပြီးတာနဲ့တစ်ဦးချင်းစီအ painterly စတိုင်သယ်ဆောင် Warhammer 40K ဂိမ်းလူသိများသည်ဝင်ရိုးတန်းစေ့စပ်တစ်ဦးချင်းစီ diorama မှတဆင့်ကင်မရာလှုပ်ရှားမှုများကိုစီစဉ်ထားဖြစ်လျှင်, ပုံရိပ်တွေကိုမသိမသာလှုပ်ရှားမှုကိုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများတစ်ဦးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောရာသီပေးရအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ကိုကိုးကားအဖြစ်ပြင်ဆင်ခဲ့သည့်ကာတွန်းကွက်ကိုအသုံးပြုခြင်း, ငါတို့နောက်ဆုံးပုံရိပ်တွေမှကင်မရာလှုပ်ရှားမှုများကိုများ၏မသိမသာကွဲပြားဘာသာပြန်ထားသော" Abonamous ကပြောပါတယ်။ "ရှေးဟောင်းပစ္စည်းကိုအရေးကြီးသောဇာတ်ကြောင်းစည်းချက်တစ်ခုစိတ်ကူးပေးခြင်း, ကျွန်တော်တို့က high-level ကိုတုန့်ပြန်ချက်ကိုပေး၏။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးအပေါ်အမြင်နှင့် Composite စရွေးချယ်စရာစူးစမ်းဖို့ဖန်တီးမှုလွတ်လပ်ခွင့်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ "
ဝင်ရိုး '' ကာတွန်းပန်းချီနောက်ဆုံးမှာလှလှပပရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာဇာတ်ကြောင်း၏ 14-မိနစ်ပါဝင်သောရှစ်သီးခြားပာအဖြစ်ကိုအပ်။ , ဖြန့်ဝေဖို့ concept ဝင်ရိုးတန်းလမ်းတစ်လျှောက်အများကြီးနည်းပညာနှင့်တီထွင်ဖန်တီးစဉ်းစားတွေးခေါ်မြားတှငျပါဝငျခွငျးအတူခြောက်လယူခဲ့ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်သည်ဤပန်းချီကားမှနက်ရှိုင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ် add ဖို့ဘယ်လိုခဲ့ပါတယ်," Abonamous ပြန်ပြောပြသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာဂုရုကျွန်တော်တို့ကို 2.5D ရေးစပ်သီအတွင်းမှမီးခိုး, မြူများနှင့်မီးခိုးမြူတစ်ဦး '' ထူ '' လေထုသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည့်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူတက် လာ. ။
"ကျနော်တို့ကလည်းအမြဲဤအတိုင်းအတာရှိသောစီမံကိန်းများကိုအပေါ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်စေရာ, ဆပ်ဖို့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်" ဟုသူကထပ်ပြောသည်။ "ကျနော်တို့ကကျနော်တို့မသက်ဆိုင်သည့်ရွေ့လျားကင်မရာတစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုရိုက်ချက်ဘို့ပဲတခါပိုင်ဆိုင်မှု rendering ခြင်းဖြင့်အချိန်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရှိရာအမှတ်ဖို့ပိုက်လိုင်းထုတ်ခဲ့။ ထိုကာလ၏ကြီးမားသောပမာဏသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့်ညာဘက်ဖန်တီးမှုနှင့်စည်းချက်ညီညီခံစားတစ်ခုချင်းစီကို sequence ကိုရတဲ့အာရုံစိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enabled ။ "
နည်းပညာဆိုင်ရာတီထွင်မှုအပြင်နောက်ဆုံးကာတွန်းပာအနုပညာပါရမီ၏နက်ရှိုင်းတဲ့ရေကူးကန်ကိုယ်စားပြု: အသိမ်းကျုံးမြင်ကွင်းကျယ်များ, ပယင်းနှင့်ကြေးနီ chiaroscuro အတွက် fetid Orks အတိတ်ငုပ်ခြင်းနှင့်အေးစက်နေတဲ့သွေးထွက်သံယို၏အချိန်လေးတွင်ကျင်းပ Space ကိုမရိန်း bulwarked ။ ဖမ်းဆီးရမိအချိန်အပိုင်းအစကနေတဆင့်ကြည့်ရှုသူတာ - ဒါဟာငြိမ်ကဗျာပါပဲ။
"ဟုအဆိုပါရှိခိုးအပေါ်ရှေးဟောင်းပစ္စည်း Entertainment ကအတူပူးပေါင်း Warhammer 40K ဂိမ်းလုံးဝအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်, "Abonamous အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့ဒါကောင်းစွာကြှနျုပျတို့သိဇာတ်ကောင်များနှင့်သဘောတရားများကိုပေါ်အလင်းကိုနှင်ထုတ်ရန်နည်းလမ်းအသစ်များကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပါတယ် - ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘို့ခံစားခဲ့ရစိတ်လှုပ်ရှား စစ်ပွဲ III ၏အရုဏ်တက် စီမံကိန်းအတွက်တိုင်းဘောင်ထဲမှာထင်ရှားဖြစ်၏။ "
ရေတံခွန် 2018 Internship - ဒီဇိုင်း / စတူဒီယို - ဇူလိုင်လ 19, 2018
အကွိမျမြားစှာတစ်ပတ်ရစ်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်ရာထူးငှားရမ်း - ဇူလိုင်လ 19, 2018
ဓါတ်ပုံပညာ - 2018 Internship Fall - ဇူလိုင်လ 19, 2018
ယခင်: BroadcastAsia မှာ Display ကိုအပေါ် TVU ကွန်ရက်ထံမှနောက်ဆုံးရအိုင်ပီဗီဒီယို Solutions
နောက်တစ်ခု: Aaton ဒစ်ဂျစ်တယ်အခမဲ့အဆင့်မြှင့်အဖြစ် Cantar X3 နှင့် Cantar Mini ကိုတည်နေရာအသံကအသံဖမျးဖို့ဖမ်းယူရေး & Play ကိုစက်ရုံကထပ်ပြောသည်
Dejero နှင့် Draganfly ဟာစံပြပွဲစဉ်!
Metaliquid AI အဗီဒီယိုအားသုံးသပ်ခြင်း Reality ပြုလုပ်ခြင်းသည်
Danvers, MA အတွက် 54th SBE အမျိုးသားအစည်းအဝေးအောက်တိုဘာ 2-3
ကုန်ပစ္စည်း Spotlight ကို: Blackmagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4K
Lawo နေဖြင့်ဒုသမ္မတ, အမေရိကနှင့်အမျှ Selected က Jeff စမစ်
#BROADCASTASIA: အနာဂတ် Capture!
Technicolor Visual Effects ကိုပို့ဆောငျဖို့ရာခေလသည် Matchett!
sim ရဲ့မီဒီယာ Shuttle ပေါ်တယ် Syfy ရဲ့ရူပတွန်၏ထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်း workflow နှင့် client ကိုန်ဆောင်မှုများတိုးတက်ကောင်းမွန်
Adorama Inspiration စီးရီးဇွန်လ 25 နှင့် 27 အပေါ်ဓါတ်ပုံပညာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအပေါ်အလေးပေး!
Archives လကိုရွေးချယ်ပါ ဇူလိုင်လ 2018 (532) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (780) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (685) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (608) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (122) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (358) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)
ရေတံခွန် 2018 Internship - ဒီဇိုင်း / စတူဒီယို
ဓါတ်ပုံပညာ - 2018 Internship Fall
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "စစ်ပွဲ III ၏ Warhammer 40,000K Dawn ၏" "အဆိုပါ" နက်ရှိုင်းသောပန်းချီကားများ။ http://www.broadcastbeat.com/the-deep-paintings-of-warhammer-40000k-dawn-of-war-iii/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။